भेटिए एस्तो अचम्म का ७ बर्षे बालक ! ‘स्पाइडर म्यान’ जस्तै पर्खाल र भित्तामा हिडने (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भेटिए एस्तो अचम्म का ७ बर्षे बालक ! ‘स्पाइडर म्यान’ जस्तै पर्खाल र भित्तामा हिडने (भिडियो हेर्नुस्)
भेटिए एस्तो अचम्म का ७ बर्षे बालक ! ‘स्पाइडर म्यान’ जस्तै पर्खाल र भित्तामा हिडने (भिडियो हेर्नुस्)
हामीले स्पाइडर म्यानको फिल्म, टिभी धाराबाहिक सबैमा देखेका छौं, स्पाइडर म्यानको करामत । स्पाइडर म्यान भित्तामा, पर्खालमा घरी यता घरी उता हिडेको र उफ्रेर भित्तामा टाँसिएको देखेर हामी रोमाञ्चित भएकै हौं । यी त फिल्की कुरा भए, चमात्कारीक हुन्छन् नै ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अहिले चर्चा हुन लागेका बालक भने भारतकानपुरका हुन् । उनी सात बर्षका मात्र छन् । तर उनी बच्चाको स्पाइडर म्यान जस्तो झट्टपट पर्खालमा भित्तामा चढ्ने उत्रने गर्दै आएका छन् त्यो पनि बिना डर ।
कानपुरमा रहेका यी यसार्थ सिंह ७ बर्षका भए र ३ कक्षामा पढ्छन् । उनी बिना कुनै सहारामा स्पाइडर म्यान जस्तो ठूला र अग्ला पर्खालमा छिटो छिटो चढ्न र अडिन सक्छन् । उनले टिभीमा स्पाइडर म्यानको नक्कल गर्दा यस्तो भएको बताएका छन् ।
यी सात बर्षिय बालक हात र खुट्टाको पञ्जाहरुका सहाराले माउसुली झै भित्तामा अडिन सक्छन् । उनी आफू स्पाइडर म्यान मूवीबाट प्रभावित भएको र फिल्म हेरेपछि भित्ता छढ्न मन लागेको बताएका छन् ।
उनको परिवार भने बालकको यो हरकत देखेर पहिले निक्कै डरायो । लड्ने या चोट लाग्ने उनीहरुको डर भने बालकको नियमित अभ्यासका कारण हराएको छ । उनी ठूलो भएर आईपीएस अफिसर बन्ने चाहना राख्दछन् । उनले आफ्नो पहिलो करतव आफ्ना दाइलाई देखाए, त्यसपछि परिवारका अरु सदस्यलाई । अहिले त उनको चर्चा देश बिदेशमा हुने गरेको छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मलमासको समयमा परेको आज पुर्णिमाको दिन यसो गरेमा नसोचेको फल मिल्छ